Isixazululo: ICinnamon ayinciphisi noma inyuse ukukhanya ku-Arch Linux | Kusuka kuLinux
khanyisile | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Hhayi bafo, namuhla ngikulethela isixazululo senkinga obekufanele ngiyixazulule kufayela lami le- I-Cinnamon con I-Arch Linux.
Inkinga bekuwukuthi ku-HP Envy M4 Notebook, inkinobho yokunciphisa nokwandisa ukukhanya iyasebenza futhi iboniswa kusinamoni, KODWA OH! ayinyusi noma inciphise i-gloss.
Ngokusebenzisa umyalo olandelayo:
Ngangizobonisa isilawuli esimweni sami bavele 2
Inkinga ukuthi konke kuyasebenzela umabhebhana kepha ayisebenzisi i-intel_backlight okuyikho okusetshenziswa incwajana yami.
Singakwazi kanjani lokhu? Kulula ngomyalo:
Okusikhombisa ukubaluleka kwayo futhi uma sicindezela inkinobho yekhibhodi bese wehlisa noma uphakamisa ukukhanya kuyayiguqula. Kepha njengoba ngishilo, akuyona leyo incwajana eyisebenzisayo uma kungenjalo ukukhanya_okukhanya, manje uma senza okufanayo kodwa nge-intel sizobona okuhlukile:
Kusinikeza inani kepha uma siliguqula lisuka esigungwini sizobona ukuthi ukukhanya kuguquliwe.
Sizobona ukuthi ukukhanya kuyashintsha noma kukhuphuke kuye ngenani esilisebenzisayo.
Sakha noma siguqula ifayela /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf futhi sengeza okulandelayo:
Isigaba "Isikhombi sedivayisi" ikhadi0 "Umshayeli" Intel "Inketho" Ukukhanya kwangemuva "" intel_backlight "BusID" PCI: 0: 2: 0 "EndSection
Ngemuva kwalokhu sidinga ukuguqula umugqa olandelayo kufayela le- / etc / default / grub:
Njengoba ubona ngingeza kuphela i-acpi_backlight = umthengisi ngaphakathi komusho, kuya ngokuthi eyakho ingezwe kanjani ngaphakathi kuphela.
Siqhubeka nokuvuselela i-grub.cfg yethu ngomyalo olandelayo:
futhi kunjalo uma kwenzeka ngisebenzisa:
kepha uma kwenzeka: inhlanhla engu-3 futhi ngiyethemba isiza umuntu onenkinga efanayo futhi ozama ukuyixazulula n_n ukubingelela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Lungisa: ICinnamon ayinciphisi noma inyuse ukukhanya ku-Arch Linux
ngiyabonga ngokwabelana .. imikhonzo
Futhi kufanele kube ideskithophu enobungane futhi ekhethekile yabasebenzisi be-novice….
yingakho abantu bahlala kude neLinux.
Alikho icala, uma ungenanto enhle ongayisho, kungcono ungaphawuli. Uma ufunda i-athikili uzobona ukuthi lokhu kwenzeka kuphela kwi-hardware ethile. Akungenzeki kimi, nabanye abantu abangama-20 engibaziyo abane-laptop futhi abasebenzisa i-GNU / Linux futhi.
Ingasaphathwa eyokuthi amakhompiyutha afika afakwe ngaphambili nenye i-OS "enobungani obukhulu", umthengisi noma umenzi usesilungisele konke lokho, noma bekufanele basifakele bonke labo bashayeli abenziwa yinoma yimuphi umsebenzisi we-Linux akudingeki ukufaka.
Akukho cala noma ukuqala ingxoxo engenamqondo, kepha uRubén uqinisile, abantu abaningi bahlala kude neLinux ngenxa yezinkinga ezinjengalezi, sengikubone kaningi. Kunemibono eminingi engaphawuli nganoma yini "engemihle" mayelana ne-linux kepha futhi ayisho lutho oluhle ... ake sithi ngokwesibonelo "kuhle kakhulu, ngizozama" futhi lawo mazwana awacindezelwa nganoma iyiphi indlela ... Ngicabanga ukuthi kufanele ube ngisho noma ubekezelele kakhudlwana.
Ngakolunye uhlangothi, emathangeni ami siqu nginenkinga efanayo, (yize ikanye nobuntu nesinamoni), lapho ngifika ekhaya ngizozama isixazululo bese ngithumela imiphumela. Ozithobayo.
Ungabi yizindlalifa. Umuntu kufanele abone inhloso yohlelo lokusebenza ngaphambi kokulifaka noma ukulisebenzisa. Kusobala ukuthi izinto ezithile zikhungathekisa abaqalayo, abangakwazi ukuthi lezi zinto zenzeka ngehadiwe elithile, noma ohlelweni oluthile lokusebenza, njenge-gentoo noma i-arch linux.
Ngafaka i-arch linux futhi engxenyeni ethile kuyikhanda, kepha ngikwazile ukuyenza ibe nesinamoni, yize ngemuva kuka-3 iqala ingasayiqali. Kepha ngazi okuningi nge-gnu linux futhi ngizokwazi ukuyixazulula; into ukuthi, yi-Arch, futhi njenge-gentoo, uma ungazazi izinhloso zakho, uzobe ufile futhi uzokhuluma kabi nge-gnu linux impilo yonke.
Inhloso yokuqala ukuqonda ukuthi izinto ezithile azisebenzi ngoba i-firmware kungenzeka ukuthi yenziwe ngubunjiniyela obuguqulayo ngoba yenzelwe kuphela ukusetshenziswa kuma-winbugdows futhi ayisekelwa ngezizathu zebhizinisi. Inhloso yesibili ukuqonda ukuthi leyo OS ikhomba ini, yiziphi izinhloso zayo eziyisisekelo, uma kungukuzinza (debian), uma kungukusebenza (ubuntu / mint), uma kungukuguquguquka kwezinto (i-arch, gentoo), uma ingeye amaseva, uma kwenzelwa ukutakula, uma kungemidlalo, uma kungokwesifundo, njll.
Kuhle kakhulu! Ngibe nenkinga efanayo. Siyabonga ngokufaka.
Okokuqala, ngiyabonga !! Ekugcineni i-laptop yami iyacwebezela, yiFujitsu AH562 futhi bengingatholanga lutho ngakho kwi-inthanethi.
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-athikili akufanele iqonde i-Arch, isebenzela amanye ama-distros, ngivele ngakwenza ku-Fedora 19 futhi ngiqinisekile ukuthi isebenza nganoma iyiphi enye nge-software yakamuva.
empeleni 🙂, ngiyizamile ku-mint 16 futhi isebenza kuphela lapho kuvuselelwa ikhodi yile: Sudo update-grub
Ngiyabonga ngokubhala lo mbhalo! Ulungise inkinga ecasulayo engibe nayo ngamakhompyutha ami amabili kwamathathu.
Ngiyakukhuthaza ukuthi uqhubeke ubhale ama-athikili amaningi!
Ngiyabonga ngendatshana, usanda kuba lusizo olukhulu emehlweni ami 😀
Ngefayela lokwakha 20-intel.conf Kwakwanele kimi, ngoba lapho ngifaka umugqa ku-grub, yanginika iphutha lapho ngiqala. Ngiyabonga. : ')
Bengimane ngifuna isisombululo saleyo nkinga!
Bengifuna ukukubuza ukuthi ngingenza yini inqubo efanayo ngisebenzisa i-Elementary OS Luna.
I-PS: uma wazi ukuthi ungamisa kanjani izipikha ukuze zizwakale zonke kanye namahedfoni, ngiyabonga kakhulu!
imikhonzo nokubonga okuvela e-Uruguay!
UHans Gallardo Serapio kusho
Isebenza kubuntu bami 14.04 nge-Asus Aspire laptop yami.
Phendula uHans Gallardo Serapio
UJuan Nava kusho
ngibona kakhulu! Kuze kube manje bengikwazi ukuguqula ukukhanya nge "echo number> / sys / class / backlight / intel_backlight / brightness" kepha bekuyisidina kakhulu futhi manje kusebenza nezinkinobho ze-😀
Phendula u-juan nava
Ukwakha i-App (Vala + GTK 3) [ingxenye yesithathu]